Chii chinonzi gemstone tester? Muedzo wedhaimani? Nyowani yekuvandudza 2021
Hapana chakavimbika chinonyatsooneka chekuyera gemstone. Iko kune dzakawanda zvevarongorori, asi ivo chaizvoizvo kuoma kwevatendi, izvo zvisingaratidzi kutenderera kwedombo.
Zvinosuruvarisa, ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakanyanya kushandiswa zvinoshandiswa nevatengesi vemabwe.
Ukatarisa pamufananidzo uchaona mutongi ane nhamba dzinotangira kuruboshwe kurudyi na1, 2, 3, 4, 5….
Ma LED anotonhora paunobata pamusoro pebwe. Iwe unogona kuona nhamba iyo inofananidzwa nekuoma kwebwe.
Idzi ruzivo rwakarurama. Ichi ndicho chiyero chekuoma, chinonziwo Mohs chikamu
Mienzaniso yeMohs inowedzera kuoma
10 - Dhaimondi
Chiyero cheMohs chekuoma kwemaminerari kunoenderana nekugona kweimwe mineral sampuro. Iwo masampuli enyaya anoshandiswa naMohs ese akasiyana mamineral. Zvicherwa zvinowanikwa mune zvakasikwa zvine makemikari akachena solid. Zvakare imwe kana akawanda maminera anoita matombo. Sechinhu chakaomesesa kuzivikanwa chinoitika, Mohs paakasika chiyero, madhaimani ari pamusoro pechikero.
Hukukutu hwechinhu hunoyerwa zvichienzaniswa nechikero nekuwana chakaomesesa zvinhu mudombo, enzanisa nechinhu chakapfava nekukwasva zvinhu. Semuenzaniso, kana zvimwe zvinhu zvikagona kukwenya neapatite asi kwete nefluorite, kuomarara kwayo pachiyero cheMohs kunodonha pakati pe4 ne5.
Uoma hwebwe hunokonzerwa nemakemikari ayo
Sezvo dombo rekugadzira rine chimiro chimwechete chemakemikari sebwe rechisikwa, chigadzirwa ichi chinokuratidza chaizvo zvakagadziriswa zvakafanana kune rimwe denga kana rekugadzira.
Naizvozvo, madhaimani echisikigo kana ekugadzira anokuratidza 10. Rubhi rwechisikigo kana rwekugadzira richakuratidzawo iwe 9. Zvakafanana nesafiri yesainzi kana yekugadzira: 9. Zvakare neyakagadzirwa neyakagadzirwa quartz: 7…